Shabaab oo weerar Khasaare geystay ka fuliyay Degmada Qoryooley | Baydhabo Online
Dagaalyahano ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay weerar ka geysteen Degmada Qoryooley oo ka tirsan Gobolka Shabellaha hoose, kadib markii ciidamada Dowladda oo howlo roondo ah ku jira ay la kulmeen weerarkaan.
Ciidamada oo xalay xaafadaha Degmada Qoryooley ka raadinaayay rag Shabaab ka tirsan ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dagaalyahano ka tirsan Shabaabka oo hubaysan, kuwaasi oo ka soo dhex baxay xaafad ka mid ah Xaafadaha Qoryooley.
Weerarkaasi ayaa ciidamada Dowladda waxaa looga dilay labo Askari oo ka tirsaneyd ciidankii howlaha roondada ah ku jiray, waxaana kaga dhaawacmay ciidamada Dowladda labo Askari oo kale, sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen
Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah Saraakiisha ciidamada Dowladda ee howlgalkaasi horkacaayay ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Dowladda ay iska caabiyeen weerarka Shabaabka geysteen.
Waxa uu tilmaamay raggii weerarkaasi geystay inay ka baxsadeen goobta, maadaama ciidamada ay si kadis ah ugu gaadeen weerarka.
Xoogaga Shabaab oo ku dhuumaleysta Xaafadaha ayaa inta badan marka ay maqlaan inuu jiro howlgalo ammaanka lagu xaqiijinaayo, waxa ay sameyaan diyaargarow ku aadan guryaha ay ku jiraan inay kala dhex dagaalamaan ciidamada Dowladda.
Degmada Qoryooley Xaafado ka tirsan waxaa ku sugan dagaalyahano Shabaab ka tirsan oo inta badan falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka ka geysta Degmadaasi.